अमेरिकाका एक करोड ३२ लाख बालबालिका कोभिडबाट संक्रमित :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यखबर बुधबार, जेठ ४, २०७९, १२:११:००
काठमाडौं- अमेरिकामा करिब १ करोड ३२ लाख बालबालिका कोभिड १९ बाट संक्रमित भएका छन्। यहाँ महामारी सुरु भएदेखि यता एक करोड ३२ लाख बालबालिका कोभिडबाट प्रभावित भएका बताइएको छ। ‘अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्स’ले पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यहाँका १ करोड ३२ लाख बालबालिका कोभिड १९ को संक्रमणबाट संक्रमित भएको पाइएको समाचारमा जनाइएको छ।
यहाँ पछिल्लो समयमा बालबालिकामा कोभिडको संक्रमण बढ्दो देखिएको छ। जसअनुसार यहाँ गएको मे १२ सम्मको पछिल्लो हप्तामा मात्र ९३ हजार बालबालिकामा यसको संक्रमण भेटिएको पाइएको हो। पछिल्लो ४ हप्तामा मात्र कम्तीमा पनि २ लाख ४६ हजार जना बालबालिकामा कोभिडको संक्रमण बढेको देखिएको छ। अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले यहाँ पछिल्ला हप्ताहरुमा बालबालिकामा कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएको पाइएको बताएको छ।
सो संस्थाले सन् २०२२ मा मा ५३ बालबालिकामा कोभिडको संक्रमण देखिएको जनाएको हो। अमेरिकी सरकारले बालबालिकामा देखिएको कोभिडको संक्रमणलाई कम गर्न विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो ब्याक्टेरिया भेटियो हालै वैज्ञानिकले ब्याक्टेरियाको एउटा नयाँ प्रजाति फेला पारेको छ। यो प्रजातिको ब्याक्टेरिया हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो ब्याक्टेरिया भएको वैज्ञानिकले बताएका छन्। १५ घण्टा पहिले
फुटपाथमा हिँडिरहेका डाक्टरमाथि ट्राफिक प्रहरीद्वारा कुटपिट, कारबाहीको माग गर्दै निवेदन १० घण्टा पहिले
हैजासम्बन्धी समस्या पर्‍यो? ११८० मा फोन गर्नुस् ११ घण्टा पहिले
विश्वको सबैभन्दा ठूलो ब्याक्टेरिया भेटियो १५ घण्टा पहिले
बिना अप्रेसन कसरी निकालियो पेटभित्र अड्किएको चम्चा? १५ घण्टा पहिले
थप ४१ जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित २०० नाघे १६ घण्टा पहिले
उपत्यकाका चार ठाउँको पानीमा हैजाको जीवाणु१८ घण्टा पहिले
पेटमा अड्किएको चम्चा नर्भिकका चिकित्सकले बिना शल्यक्रिया निकाले २१ घण्टा पहिले